Dowladda Xasan Sheekh oo wada qorshe hubka looga dhigayo Qab-qablayaashii Dagaalka ee hore (warbixin | Dowladda Xasan Sheekh oo wada qorshe hubka looga dhigayo Qab-qablayaashii Dagaalka ee hore (warbixin – Latest News
« Ciidamada Nabudsugida oo la wareegay idaacada Shabelle
AMISOM oo ka hadashay weerarkii lugu qaaday Axmed Daaci iyo ujeedka laga lahaa »
Dowladda Xasan Sheekh oo wada qorshe hubka looga dhigayo Qab-qablayaashii Dagaalka ee hore (warbixin
Muqdisho [Gelinsoortimes] Magaalada Muqdisho ayaa waxaa ka socda qorshe ay dowladda Soomaaliya ku uruurinayso hubka,waxaana la sheegay in looga danleeyahay sidii hubka looga dhigi lahaa haraadiga qabqablayaashii dagaalka oo hadda qaarkood ku sugan dalka.
Warar lagu kalsoonyahay ayaa xaqiijinaya in qorshahaas uu ka soo fulay ra’iisal wasaaraha xukuumadda Soomaaliya,Cabdiweli Sheekh Axmed Maxamed,isla markaana saraakiisha wasaaradda amniga,saraakiisha laamaha sirdoonka iyo nabad sugidda amar lagu siiyay inay hubka ka qaadaan xubnaha aan shaqo qaran hayn ee guryahooda ku haysta hubka sida qab-qablayaashi hore.
Arrintana ayaa ka bilaabatay kaddib markii ay kordheen weerarrada iyo dilalka ka dhacaya Muqdisho oo inta badan dadka fulinaya an la garan,waxaana dowladdu go’aamisay in hubka laga aruuriyo Muqdisho si suragal u noqoto qofkii hub wata in gacanta lugu dhigo.
Sarkaal ka tirsan dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa sheegay in xukuumadu ay qaaday olole cusub oo hub ka dhigis ah, isla markaana ay gacanta ku dhigtay 500 oo qori, kaddib afar howl-gal oo laga fuliyay magaaladda Muqdisho.
Afhayeenka wasaaradda amniga qaranka ee xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya, Maxamed Yuusuf Cusmaan ayaa isna dhankiisa sheegay in howlgalada hub ka dhigista ay xukuumaddu uga hor tageyso hub gacanta u gala kooxda Al-Shabaab ee xiriirka la leh ururka Al-Qaacida.
Waxaa sidoo kale xusid mudan in dhawaan ciidamo ka tirsan kuwa nabad sugidda ay isku dayeen inay hubka ka qaadaan Cabdi Nuur Siyaad (Cabdi Waal) oo ka mid ahaan jiray hogaamiye kooxeedyadii dagaalka ee Muqdisho iyo C/wali Maxamed Qanyare Afrax oo hub fara badan iyo ciidan aabihii uu ku haystay Muqdisho inkastoo C/wali Qanyare hadda uu xildhibaan yahay.
Cabdi waal oo dhawaan saxaafadda la hadlay ayaa sheegay in sababta loo bartilmaameedsanayo ay tahay isagoo dhawaan ka hadlay heshiis la sheegay in si qarsoodi ah loogu iibsaday qayb ka mida badda Soomaaliya.
Warar kale ayaa sheegaya in guryaha Muqdisho ku yaal ee ciidanka ay tageen uu ka mid yahay hoyga m/weynaha Galmudug Cabdi Xasan Cawaale (Qaybdiid) oo isaguna ka mid ahaa hogaamiye kooxeedyadii hore ee koonfurta Soomaaliya.
Maanta ayey ahayd markii ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka ah ee Soomaaliya oo sida la sheegay ay kaabayaan ciidanka nabad ilaalinta Midowga Afrika ee AMISOM ay weerarren guriga guddoomiyihii hore ee degmada Wadajir ee gobolka Banaadir Axmed Xasan Caddow (Axmed Daaci).
Weerarka ay ciidanka ku qaaden aqalka Axmed Daaci ayaa loo maleynayaa inay la xiriirto howgal hub ururin ah oo dowladda federaalka ay maalamahan ka wadday magaalada Muqdisho.
Qorshahan oo aan la aqoon ujeedka fog ee dawladdu ay ka leedahay ayaa dadka qaar waxaa ay tilmaamayaan inay tahay hab la doonayo in lagu yareeyo hubka fara badan ee caasimadda yaal kaasoo gacanta ugu jira dadka rayidkaa.
Xildhibaan Daahir Amiin Jeesoow oo ka mid ah guddiga baaralamaanka u qaabilsan amniga ayaa isaguna sheegay in ololaha hub ka dhigista uu xal u yahay nabadgalyada caasimadda, wuxuuna tilmaamay in ay suurtagal tahay in dowladdu dadka ka iibsato hubka, si looga fogaado cabasho ka timaadda muwaadiniinta.
Lama oga illaa hadda qorshahan inuu saamayn doono gobolada kale ee dalka, waxaase la hadal hayaa sida ay ku suura gali karto in hubka laga wada dhigo qabqablayaal dagaal oo muddo ku soo dhex sitay hub fara badan caasimadda burburtay ee Muqdisho.
Ololaha hub ka dhigista ayaa waxaa dhowaan meelmariyay golaha wasiiradda xukuumadda Soomaaliya, inkastoo uusan ansixin golaha baarlammaanka federaalka ah ee Soomaaliya.
Magaaladda Muqdisho ayaa waxay lahayd suuq weyn oo lagu iibiyo hubka kaasoo abuurmay xillligii ay Muqdisho ka talin jireen qab-qableyaashii dagaalka.